New version of Ukpu okpu Enterprise Linux 7.8 dị njikere | Site na Linux
Depụta ụdị ọhụrụ nke Red Hat Enterprise Linux 7.8
Ndị na-emepe uhie uhie na nso nso a mara ọkwa mmalite nke mbipute ọhụrụ nke Linux nkesa «Uhie okpu Enterprise Linux 7.8 ″ na agbanyeghị na ewepụtara ngalaba RHEL 8.x ọnwa ole na ole gara aga, Ejikọtara alaka ụlọ ọrụ RHEL 7.x na ngalaba 8.x ma kwado ya ruo na June 2024.
Ntọhapụ nke RHEL 7.8 akara akara mgbanwe na mpaghara mmezi, ebe ihe kacha mkpa gbanwere na mmezi ahụhụ na nchekwa, na obere nkwalite ndị metụtara iji kwado usoro ngwaike kachasị.
Na ọkwa nke ụdị ọhụrụ a, mmepe ịkekọrịta:
Taa, obi dị anyị ụtọ ịkpọsa nwelite ọhụụ kachasị na ntanetị Linux na-eduga ụwa yana nnweta Red Hat Enterprise Linux 7.8. Versiondị a na-eme ka nkwenye dị ukwuu
ma jikwaa site na igwe ojii maka ọrụ ndị ọrụ IT mgbe
Ọ na-enyekwa usoro ihe eji emepụta ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ na dakọtara maka ndị mmepe ngwa ngwa.
Maka ndị chọrọ ị nweta nkwalite na nsụgharị ọhụrụ, mgbe a tọhapụrụ ụdị Red Hat Enterprise Linux 8.2 version, ndị ọrụ ga-enwe ohere iji kwalite site na Enterprise Linux 7.8.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Red Hat Enterprise Linux 7.8?
2 Etu ị ga - esi nweta ụdị ọhụụ a nke Red Hat Enterprise Linux 7.8?
Kedu ihe ọhụrụ na Red Hat Enterprise Linux 7.8?
Na mbipụta ọhụrụ a, a kpọtụrụ aha na se mechaala ọkwa mbụ nke nkwado maka ngalaba RHEL 7.x, nke gụnyere ntinye nke ndozi arụmọrụ.
A gbanwere interface maka ịgbanwe desktọọpụ arụmọrụ dị na GNOME Classic gburugburu ebe obibi, Ebugharịla bọtịnụ mgba ọkụ gaa n'akụkụ aka nri ala ma kee ya dị ka warara na thumbnails.
Nkwado agbakwunyere maka kernel Linux ọhụrụ (nke metụtara njikọ nke ntinye nke nchebe megide mwakpo ọhụrụ na usoro igbu egbu nke CPU).
Maka Windows systems na-eji ndị ọkwọ ụgbọala ActivClient eme ihe, enwere ike ịnye ohere ịnweta kredit kaadị smart.
E wezụga nke ahụ enwere ike itinye ugwu site na iji usoro FUSE na aha aha njirimara aha njirimara, nke, dịka ọmụmaatụ, na-enye gị ohere iji iwu fuse-overlayfs na akpa na-enweghị mgbọrọgwụ.
Ọ na-pụta ìhè na emelitere ngwugwu samba gaa na 4.10.4, Na mgbakwunye, SELinux na-enye ohere mmalite nke eserese eserese maka ndị ọrụ nke sysadm_u otu yana EDAC (nchọpụta njehie na mgbazi) agbakwunyere maka usoro Intel ICX.
Ọzọkwa e nyere nkwado ibuo maka OverlayFS, Btrfs, eBPF, HMM, kexec, SME, criu, Cisco usNIC, Cisco VIC, Trusted Network Connect, SECCOMP to freewan, USBGuard, blk-mq, YUM 4, USB 3.0 to KVM, Non-IOMMU to VFIO, ịgbanye onyonyo Debian na Ubuntu site na virt-v2v, OVMF, systemd-importd, DAX ka ext4 na XFS.
E tinyela ntinye nke SHA-2 algorithm, nke kachasị maka ndị na-arụ ọrụ IBM PowerPC.
OpenJDK gbakwunyere nkwado maka izo ya ezo site na iji akụkụ elliptic secp256k1.
A na-enye nkwado zuru ezu maka ndị na-ahụ maka Aero SAS (mpt3sas na megaraid_sas drivers).
Ọnụ ọgụgụ nke njirimara IPC (ipcmin_extend) amụbawo site na 32 puku ruo nde 16.
Na-enye nkwado zuru ezu maka Intel Omni-Path Architecture (OPA).
Agbakwunyere ọrụ 'nchekwa' ọhụrụ (RHEL System Roles), nke enwere ike iji jikwaa nchekwa mpaghara (usoro faịlụ, mpịakọta LVM, na nkewa ezi uche) site na iji Ansible.
Added DIF / DIX (data iguzosi ike n'ezi data / data iguzosi ike n'ihe ndọtị) nkwado maka ụfọdụ ndị ọbịa ụgbọ nkwụnye (HBAs). Qlogic HBA na-agbakwunye nkwado zuru oke maka NVMe / FC (NVMe over Fiber Channel).
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere mgbanwe nke ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Etu ị ga - esi nweta ụdị ọhụụ a nke Red Hat Enterprise Linux 7.8?
Ihe oyiyi nwunye RHEL 7.8 dị maka nbudata naanị maka ndị ọrụ edebanyere aha na Portal Customer Portal ma kwadebere maka x86_64, IBM POWER7 +, POWER8, na IBM System z architectures.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Depụta ụdị ọhụrụ nke Red Hat Enterprise Linux 7.8
Enweelarị GNU Taler 0.7, mara usoro usoro ịkwụ ụgwọ elektrọnik a n'efu